प्रकाशित मिति: 2018/06/05
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मन्त्रालय र विभागहरु उच्च अधिकारीहरुलाई ठूला योजनाहरु ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले देशको देशको आवश्यकतालाई बुझेर तथ्य सहित विस्तृत कार्ययोजना बनाएर पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४२ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उच्च अधिकारीहरुलाई झिनामसिना योजनामा नअल्झिनसमेत निर्देशन दिए। झिनामसिना होइन राष्ट्रिय महत्वका बहुसंख्यक जनता लाभन्वित हुने योजना बनाउनुस, उनले भने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य योजना र सम्पन्न हुने समय समयसीमा पनि तोकेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुस्।
उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न के के आवश्यक छ ? के कति लगानी आवश्यक छ ? भन्ने स्पष्ट खुलाएर योजना बनाएर पेश गर्नसमेत मन्त्रीलाई निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतको सरकारले बन्द गरेका उद्योग वर्तमान सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्दै अगाडि भने, कति वटा उद्योग छन्, कति उद्योग बन्द भए, कतिलाई तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ, यी सब योजना बनाएर कार्यन्वयन थाल्नुस्।
प्रधानमन्त्री ओलीले साना योजना मन्त्रालय तहबाटै टुंग्याउन र ठुला योजनाहरु राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पेश गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए। दुईचार चपरी माटो कोदालोले नै फाल्नुहोस, डोजरै चलाउनु परे यहाँ ल्याउनुहोस, उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पनि वृहत्तर योजना बनाएर समितिको बैठकमा पेश गर्न आग्रह गरे। अब चल्ते चलाते होइन साँच्चै देश विकास गर्नुछ। त्यसले गर्दा सबैले फरक ढंगले सोचौं। फरक ढंगले काम गरौं, उनले भने।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ को दोस्रो चौमसिक बजेट खर्च र आयोजनाहरुको प्रगति विवरण पेश गरेका थिए।